चीनका राष्ट्रपतिले किन भने, ‘युद्धका लागि तयार हुनुहोस् सेना’ ? - Deshko News Deshko News चीनका राष्ट्रपतिले किन भने, ‘युद्धका लागि तयार हुनुहोस् सेना’ ? - Deshko News
चीनका राष्ट्रपतिले किन भने, ‘युद्धका लागि तयार हुनुहोस् सेना’ ?
बीबीसी चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिंगले देशले संकटकालको सामना गरिरहेका कारण पिपल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात् पिएलए युद्धको स्थितीका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार सेन्ट्रल मिलिट्री कमिशन (सिएमसी) को बेइजिङमा भएको बैठकमा कशिशनका अध्यक्ष शी जिनपिङले देशमा विभिन्न प्रकारको खतरा बढिरहेकाले अधिकारीहरु सतर्क हुनुपर्ने बताएका छन् ।
द ग्लोबल टाइम्समा छापिएको एक खबर अनुसार शुक्रबार भएको बैठकमा शी जिनपिंगले भने, ‘संसारमा यस्ता विभिन्न परिवर्तन भइरहेका छन् जुन पछिल्लो एक शताब्दीमा भएका थिएनन् र चीन अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ जहाँ विकासको रणनीतिक अवसर चीनका लागि महत्वपूर्ण छ ।’
पत्रिकाका अनुसार उनले सैनिकको तालिमका लागि आवश्यक एक आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
युद्धका लागि तयार हुनु भन्दै किन आदेश दिए ?